Melomania Touch, headphone mahafinaritra indrindra avy amin'ny Cambridge Audio | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 01/01/2021 18:00 | Nohavaozina amin'ny 23/12/2020 00:28 | General, hevitra
Amin'ny fotoana hafa dia efa namakafaka ny vokatra iray avy any Cambridge Audio izahay, orinasan-tserasera manara-penitra malaza izay monina any Angletera ary fantatry ny kalitaon'ny vokatra vokariny. Amin'ity indray mitoraka ity dia mandeha amin'ny vokatra vao avy natomboka izay tsy tadiavinay tsy hita, ny Melomania Touch.
Ny headphones True Wireless (TWS) farany avy any Cambridge Audio dia nahatratra ny tsena ary nosedrainay izy ireo. Lazainay aminao ny fanadihadianay lalina momba ny Cambridge Audio Melomania Touch vaovao miaraka amin'ireo fiasa feno antsipirihany. Tsy isalasalana fa ny orinasa britanika dia nanao asa tsara kalitao indray.
1 Volavola: Sahy sy tsara kalitao
2 Seho ara-teknika: centric Hi-Fi
3 Kalitaon'ny feo: ny fanadihadianay
4 Fampiharana Melomania, sanda fanampiny
5 Fahaleovan-tena sy ny traikefan'ny mpampiasa
Volavola: Sahy sy tsara kalitao
Mety tianao kokoa izy ireo na tsy tianao kokoa izy ireo, saingy efa fantatrao fa amin'ny fanadihadihana ataoko dia tiako ny mitehaka marika izay manalavitra ny tenany amin'ny mankaleo na mahazatra ary misafidy famolavolana sahy na hafa. Izany no zava-misy amin'ireo Melomania Touch, headphone audio Cambridge vaovao.
Tianao ve izy ireo? Azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Ity rohy ity.
Ny orinasa britanika Nilaza izy fa nanadihady manodidina ny 3000 ny sofina ary ny zava-nisongadina dia ity endrika hafahafa sy tsy ara-dalàna ity. Etsy ivelany dia ahitantsika plastika nohosorana izay toa tsara dia tsara, fonosana vita amin'ny fingotra roa sy ny lambany.
Izaho manokana soy an'ireo izay manana olana amin'ny sofina an-sofina satria alatsako daholo ny maodely rehetra. Tsy hitranga amiko izany amin'ny Melomania Touch, manana "fin" silipo izy ireo izay mahatonga ny headphone tsy mihetsika ary mety amin'ny karazana hetsika rehetra. Ny habetsaky ny pads izay ampidirina amin'ny vokatra dia saika tsy azo atao ny tsy mampifanaraka azy ireo araka ny itiavanao azy.
lafiny Tranga famandrihana: 30 x 72 x 44mm
lafiny Headphones: halalin'ny 23 x Haavo (earpiece tsy misy farango) 24 mm
lanja Raharaha: 55,6 grama
lanja Headphone: 5,9 grama avy
Mikasika ny miresaka mazava momba ilay fonony. Hitanay ny tranga famahanana premium, vita amin'ny hoditra namboarina ho an'ny ivelany, manana LED famantarana bateria dimy sy seranan-tsambo USB-C ao aoriana izy io. Ny boaty dia manana endrika boribory lavalava ary feno habe ary ahazoana mitondra azy, toa fahombiazana izany ary ny tena marina dia hoe manisy kalitao.
Farany, mariho fa afaka mividy headphones amin'ny fotsy sy mainty isika, miankina amin'ny safidintsika sy ny tsirony.
Seho ara-teknika: centric Hi-Fi
Andao hiresaka tarehimarika ary hanomboka amin'ny lozisialy 32-bit dual-core sy ny subsystem audio iray tokana. Qualcomm QCC3020 Kalimba 120MHz DSP, tamin'ity fomba ity sy tamin'ny alalany Bluetooth 5.0 Kilasy 2 Mahazo fahaiza-mandefa feo avo lenta izahay, na dia betsaka aza ny ifandraisany amin'izany rehetra izany codecs: aptX ™, AAC ary SBC miaraka amin'ny profil A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Ankehitriny isika dia mandeha mivantana amin'ireo mpamily, ireo mpandahateny kely ao anaty headphones izay manova ny fanodinana betsaka ho lasa feo manara-penitra. Manana rafitra mavitrika miaraka amina diaphragm misy valiny 7 mm isika, ary izao no vokany:
Fahita matetika: 20 Hz - 20 kHz
Fanaparitahana Harmonika: <0,04% amin'ny 1 kHz 1 mW
Amin'ny ambaratonga teknika dia mila manonona ireo mikrô koa isika, ary manana fitaovana MEMS roa miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba cVc (koa avy amin'ny Qualcomm) ary ny fahatsapana ny 100 db SPL amin'ny 1 kHz.
Manana ny bateria 500 mAh ao anatiny fotsiny izahay ary handoa vola amin'ny 5V amin'ny alàlan'ny tariby famandrihana USB-C ao anatiny, fa tsy ilay adapter herinaratra. Izany dia mitaky fihenam-bidy 120 eo ho eo manomboka amin'ny 0% ka hatramin'ny 100%.
Kalitaon'ny feo: ny fanadihadianay
Ianao dia efa nahita isa maro izay milaza aminao saika na inona na inona raha tsy hoe manana fahalalana manokana ianao, koa andao handeha amin'ny fandinihana mahazatra antsika, inona no zavatra niainantsika tamin'ny fampiasana azy ireo, indrindra fa amin'ny fandinihana eto dia saika nanandrana ny ankamaroan'ny finday avo lenta TWS izay misy eny an-tsena.
Ambany: Amim-pahatsorana, rehefa tsy dia misy mombamomba azy ny headphone dia matetika isika no miatrika vokatra ara-barotra izay te-hanarona ny tsy fahampiana hafa. Tsy mitranga amin'ny Melomania Touch izany, zavatra antenaina raha jerena fa vokatry ny Cambridge Audio izy ireo. Na izany aza, ny tsy fahatongavan'izy ireo mialoha amin'ny bas malaza dia tsy midika hoe tsy afaka mijery toy izany izy ireo, hiresaka momba izany isika avy eo. Ny bass dia tokony hisy ary mamela antsika hihaino ny ambiny atiny. Mazava ho azy, raha mieritreritra ny hihaino reggaeton ara-barotra fotsiny ianao dia mety tsy ho vokatrao io.
Media: Toy ny mahazatra, dia manao ilay fitsapana landihazo izahay miaraka amin'ny rajako, Queen, Robe ary Artic Monkeys. Kely headphones afaka mamitaka an'ity mozika ity ary mahita fahasamihafana tanteraka amin'ireo zavamaneno isika.
Amin'ny ankapobeny, tsy manana fatiantoka kalitao isika, tsy manana korontana ary feo re tsara. Ny fitsapana anay dia natao tamin'ny alàlan'ny Huawei P40 Pro miaraka amin'ny aptX sy iPhone amin'ny alàlan'ny AAC.
Fampiharana Melomania, sanda fanampiny
Izahay dia nisedra ny fampiharana Melomania amin'ny dingana beta. Ny valiny dia niavaka, hamela antsika rehetra hanao izany ny fampiharana. Azonao atao ny mahita ny rindranasa ho an'ny iOS sy Android (amin'izao ora anoratanao izao dia mbola tsy navoaka tamin'ny fomba ofisialy).
Mamorona profil manokana
Ampandehano / vonoy ny fiasan'ny fikasihana
Amboary ny fitoviana
Alefaso / esory ny maody mangarahara
Tsy misy isalasalana, tena zava-dehibe tokoa ny fahazoana vaovao farany (roa raha mbola nisedra azy ireo izahay) ary ambonin'izany rehetra izany dia ny manamboatra ny kalitaon'ny feo amin'ny headphones amin'ity haavo ity, bravo mankany Cambridge Audio.
Manomboka amin'ny fizakan-tena isika, Adiny 50 manontolo raha raisinay ny ora mitohy hatramin'ny 9 (amin'ny alàlan'ny mombamomba A2DP ihany) sy ny sisa 41 omen'ny boaty. Ny tena zava-misy dia mahazo feo mitohy mandritra ny 7 ora amin'ny kalitao avo lenta isika ary miaraka amin'ny maody mangarahara izay tsy mandeha intsony, manodidina ny 35/40 ora amin'ny totaliny.
Amin'ny fampiasana maharitra dia mahazo aina izy ireo, iNa dia mampihetsika ny Transparency Mode aza isika izay handray feo toy ny fanairana na feo amin'ny alàlan'ny mikrô mba hamoahana mazava tsara azy ireo, ary ny maha-headphone an-tsofina miaraka amina fangejana miavaka dia manana fanafoanana feo an-tsokosoko ampy tsara hankafizantsika mozika ary mety ilaina ny Transparency Mode.
Ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Melomania Touch dia tena tsara tokoa, nifanehatra tamin'ny vokatra lafo vidy avy any Cambridge Audio indray izahay, hita taratra ihany koa amin'ny vidiny, avy amin'ny 139 euro Azonao atao ny mividy azy roa amin'ny tranokala ofisialy sy amin'ny alalàn'ny Ity rohy ity.
Navoaka tamin'ny: January 1 amin'ny 2021
Fanovana farany: Desambra 23 amin'ny 2020
Fitaovana sy famolavolana kalitao, mahatsapa premium
Personalization amin'ny alàlan'ny App anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Melomania Touch, headphone mahafinaritra avy any Cambridge Audio
Huawei dia manolotra ny beta ofisialin'ny HarmonyOS 2.0 ho an'ny finday